Maxaa lagu arkaa Rome% | Wararka Safarka
Maxaa lagu arkaa Rome
Mariela Carril | | Maxaa la arkaa, Roma
Mid ka mid ah magaalooyinka ugu dalxiiska badan adduunka shaki la’aan Roma. Iyada oo kumanaan sano oo taariikh ah ay wax u leedahay qof walba: burburka qadiimiga ah, dhismayaasha qarniyadii hore, farshaxanka, gastronomy, dukaamaysiga iyo cawayska. Weligaa caajisin maysid, maalin ama habeen.
Maxay tahay inaadan seegin, jidadkee ayaa habboon inaad raacdaa? Intaas oo dhan iyo wax badan oo ka mid ah maqaalkeenna maanta oo ku saabsan mid ka mid ah meelaha ugu dalxiiska badan dalxiis ee dhammaan: Rome.
Booqashooyinka xiisaha leh ee Rome
Sidii aan ku sheegnay bilowgii, Rome waxay leedahay kumanaan sano oo taariikh ah sidaa darteed waxaad diiradda saari kartaa dhinacyo kala duwan: kani waa kan Rome diimeed, Rome casri ah, Rome qadiimiga ah, Rome cagaaran iyo Rome of art.
La Romo diimeed waxay ku urursan tahay macbudyada diimaha kale ee aan Masiixiyiinta ahayn iyo kaniisadaha iyo basilicas. Ayaa ah Sunagogyada, oo la dhisay bilowgii qarnigii XNUMX-aad oo sidoo kale ah sunagogga ugu weyn qaaradda Yurub, iyo Masaajidka, oo aad uga casrisan, wuxuu soo bilaabmay 1995, wuxuuna leeyahay qiyaastii 30 kun oo mitir murabac ah.
Ka hadalka kaniisadaha iyo basilicas-ka Rome sidoo kale waxay ka dhigan tahay ka hadalka macbudyo qadiim ah maadaama dhismayaal badan oo Masiixiyiin ah lagu dhisay macbudyo jaahil ah. Ma leedahay Pantheon, tusaale ahaan. Dhinaca kale waa Rome Cathedral, St. John Lateran, isku xidhka ka dhexeeya jaahilnimada iyo kiristaanka, oo xidho Basilica ee San Clemente oo leh muuqaal qurux badan oo baroque ah. Waxaad ku arki kartaa Michelangelo's Moses qolka barxadda ee St. Peter's Basilica oo ku taal Vincoli.
La Basilica ee Santa Maria la Duqa magaalada Waa macbud aad loo ilaaliyay oo leh mitir cabirkiisu yahay 36 mitir oo laba jibbaaran iyo farshaxanno farshaxan oo gudaha ku jira Dhinaca kale ee Tiber-ka ayaa ah Cecilia Basilica gudaha Tratevere. Isku soo wada duuboo, sida iska cad, Basilica ee Saint Peter, Basilica ee Saint Clement, kan Saint Paul Dibedda Darbiyadeeda, tan Saint Mary ee Malaa'igta iyo Shuhadadas, macbudkii Roman qadiimiga ahaa, iyo Basilica ee San Juan.
Jidka Rome qadiimiga ah waxaa ka mid ah Qubeyska Caracalla taariikhdu markay ahayd 217 miilaadiga, dhawaana Aagga Domus iyo Coliseum. Wax walba waa dhow yihiin, wax walba oo lugeynaya. Hadaad safarka sii wado waad imaaneysaa Palatine iyo Madasha Roman si aad ugu socoto Via Sacra. Fagaaraha Venice ayaa leh Suuqyada Trajan AD qarnigii XNUMXaad iyo Ara Pacis. Haddii ay tahay waqtigii la nasan lahaa oo la cuni lahaa sandwich waxaad ka faa'iideysan kartaa tallaabooyinka Capitol.
Haddii aad timaado Rome oo ay jirto cimilo wanaagsan markaa wax walba waad ku qaban kartaa lug. Haa, waa inaad socotaa laakiin runta ayaa ah in haddii aad ku jirtid xaalad jireed oo wanaagsan ay tahay tan ugu fiican. Socodka waxaad si fiican u baran kartaa xaafadihii hore oo waxaad ka ogaan kartaa wax kasta oo yaab leh gees kasta, waxaad ku socon kartaa bangiyada Tiber-ka, ku dhex mari Beerta Laatiinka Latin oo aad aragto biyo mareennada, ku socdaan waddooyinka Roomaaniga qadiimiga ah ama aad raacdo baaskiil, maxaa diidaya?
Dabcan, Rome waa magaalo laba jibbaaran sidaa darteed waxaad leedahay Plaza de España, Plaza San Pedro, Campo de Fiori ama Piazza Navona, tusaale ahaan.
Marwalba waxaan usheegaa asxaabteyda in Rome aadan qarash gareeyn euro si aad biyo biyo dhalo ah ugu iibsato maxaa yeelay waxaad la baxeysaa dhaladaada yar waxaadna ka buuxin kartaa ilo walba oo aad la kulanto wadooyinka. The ilo biyood Waxay ka mid yihiin dhaxalka magaalada biyahana waa la cabi karaa. Ayaa ah Isha Triton gudaha Piazza barberini, waxaa qoray Gian Loernzo Bernini, the Isha Naayiad, Piazza della Repubblica, ayaa Barcaccia, ka Trevi Fountain, Fontana delle Tartarughe gudaha Piazza Mattei, the Isha Wabiga Webi BerniniAre Waxaa jira laba kun!
Sida Rome ee farshaxanka, waxaa jira matxafyada meel kasta. Anigu ma ihi madxafka madxafka sidaa darteed marwalba waan arkaa dalabkan waxaanan go’aansadaa mid si dhab ah ii xiiseynaya Inaad aado tagisteydu maahan wax aniga. Aad baan u jecelahay cilmiga qadiimiga sidaa darteed haddii ay tahay inaad sidoo kale ogaato Matxafyada Capitoline, Suuqyada Trajan, Matxafka Ara Pacis, Matxafka Gidaarka, Villa of Maxentius taas oo ah tuulo qurux badan oo ku taal Via Appia Antica oo leh circus, mausoleum iyo qasriga iyo Matxafka Casal de'Pazzi, oo leh sariir qadiim ah oo webi ah 200 oo kun oo sano, wax intaa ka badan iyo wax kayar toona ma leh.
El Matxafka Rome, Matxafka Napoleonic, Matxafka Jamhuuriyadda Roman waa matxafyo kale oo xiiso leh. Ma inaad wax walba bixiso? Hagaag maya, socodka waa bilaash, inaad aragto ilaha ama aad socod guud guud ahaanba aad u hesho. Ugu fiican Muuqaallo muuqaal ah Waxaad ka heli kartaa iyaga oo jooga Piazzale Giuseppe Garibaldi, buurta Gianicolo, laga bilaabo Terraces-ka ee loo yaqaan 'Vittoriano Terraces' (si aad sare ugu kacdo, waa inaad bixisaa wiishashka), aragtida Piazza Napoleone ama Beerta Orange.
Gelitaanka Pantheon waa bilaash, Qabuuraha Protestant oo leh qabuuro Shelley iyo Keats iyo kaniisado yaryar sidoo kale. Inaad kharash gareeyso ikhtiyaar ayaa ah Roma Pass, laakiin waa kaliya haddii aad runtii qorsheyneyso inaad booqato wax badan. Waxaad haysataa ikhtiyaarka 48 iyo 72 saacadood.
Waa a kaarka dhaqanka dalxiiska Waxay ku kacaysaa 28 euro muddo 48 saacadood ah oo u oggolaanaysa gelitaanka iyo isticmaalka bilaashka ah ee gaadiidka dadweynaha ee magaalooyinka, qiimo dhimista dhacdooyinka, adeegyada iyo bandhigyada, qiimo dhimista tikidhada matxafyada ama goobaha qadiimiga ah iyo gelitaanka bilaashka ah ee matxafka ama goobta qadiimiga ah ee aad dooratay. Nooca 72-saac wuxuu ku kacayaa 38 euro wuxuuna ku darayaa faa iidooyin qaar sida soo galitaan bilaash ah laba matxaf.
Saddex maalmood Rome waxaad ku siin doontaa waqti kugu filan oo aad ku ogaatid waxyaabaha ugu muhiimsan laakiin haddii aad sii joogto hal maalin oo kale oo cimiladu wanaagsan tahay markaa ha joojin joojinta Rome ku wareegsan. Ugu fiican dalxiisyada Waxay kala yihiin Villa d'Este, oo ah goob taariikhi ah oo caalami ah oo ku taal Tivoli, oo 25 kiiloomitir u jirta, Villa Adriana, boqortooyo iyo xarrago, Villa Gregoriana oo leh jardiinadeeda, Ostia iyo dhismaheeda qadiimiga ah iyo aagga cagaaran ee Jardines de Ninfa.
Anigana i aamin, hal safar oo Rome aan marna ku filnayn. Waa inaad soo noqotaa, soo noqotaa oo aad soo noqotaa
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka » Roma » Maxaa lagu arkaa Rome
Booqashooyinka godadka Artá ​​ee Mallorca
Dharka caadiga ah ee Mexico